के मंगास्ट्रीम तल छ? सर्वश्रेष्ठ विकल्पहरू जाँच गर्नुहोस् (२०२०) - मनोरञ्जन
मंगास्ट्रीम एक अनलाइन कमिक डेटाबेस वेबसाइट हो जहाँ तपाईं पूर्ण रूपमा निःशुल्क जापानी कॉमिक्स पढ्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो सबै हास्य प्रेमियों को लागी एक नि: शुल्क सेवा हो। मa्गास्ट्रिमले उनीहरूलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै छ एक दशकदेखि उच्च गुणवत्ताको मa्गा कमिक्स नि: शुल्क उपलब्ध गराउने वाचाको साथ।
के मंगास्ट्रीम तल छ?
लगभग दस बर्षको रिलीज पछि, आधिकारिक वेबसाइट पूर्ण रूपमा तल गएको छ र पहुँचयोग्य छैन।बन्दको मुख्य कारण मa्गास्टेमद्वारा स्पष्ट गरिएको छैन।यद्यपि केही स्रोतहरू अनुसार यो अपेक्षा गरिएको छ कि मa्गा कमिकको मालिकहरूले उनीहरूलाई वेबसाइट हटाउन कुनै प्रकारको दबाब दिएका छन्।
म्यागस्ट्रीमले उनीहरूको सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ केवल सामग्री पढ्ने कानूनी तरिका लाई बढावा दिन। अर्को कारण भनेको केहि सेवाहरूलाई म to्गाप्लस बढ्न मद्दत गर्नु थियो। म्यागा स्ट्रिम चाहान्थे कि पाठकहरु केहि कानुनी स्रोतहरुबाट मात्र हास्यहरु पढ्न सकून्।सबैभन्दा लोकप्रिय मa्गा वेबसाइट अहिलेको रूपमा इन्टरनेट बन्द भएको छ।
का लागि साईन अप गर्नुहोस् नेटफ्लिक्स भारत स्ट्रीमफेस्ट २ दिन निःशुल्क स्ट्रिमि Enको मजा लिन।
उत्तम मंगस्ट्रीम विकल्प:
मast्गस्ट्रीम वेबसाईटलाई हटाइएको कारणले यसका धेरै वफादार दर्शकहरू वेबसाईट अब पहुँचयोग्य छैन भन्ने तथ्यबाट खिन्न हुन सक्छन्। जहाँसम्म, त्यहाँ धेरै प्रतिस्थापन विकल्पहरू छन्, तर मa्गास्ट्रिम सबैभन्दा लोकप्रिय अनलाइन मa्गा कमिक्स स्ट्रिम प्लेटफर्महरू बीच हुने थियो र हुनेछ। यहाँ मंगस्ट्रीम विकल्पको सूची छ जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ:
यस वेबसाइटसँग आगन्तुकहरूको लागि उच्च स्तरको म mang्गा कमिकहरूको विशाल डाटाबेस छ। यदि तपाइँ प्रायः मa्गा कमिक वेबसाइटहरूको पुरानो दृश्यको प्रशंसक हुनुहुन्न भने, त्यसोभए तपाइँले यस वेबसाइटलाई हेर्नु पर्छ। यस वेबसाइटको रूप पूर्ण रूपमा फरक छ।
यस वेबसाइटमा लगभग सबै मa्गा संग्रहहरू छन् जुन कुनै मा mang्गा पाठकलाई आवश्यक हुन्छ। तपाईं A-Z नाम, रेटिंग्स, हेराईहरू र नयाँ कोटीहरूमा आधारित म .्गा कमिकहरूको लागि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
यसमा १०,००० भन्दा बढी मas्गाको म mang्गा संग्रह छ। वेबसाइटले यसको युआरएल ठेगाना परिवर्तन गर्दछ यसको लोकप्रियताको कारण जसले यस वेबसाइटको विरुद्ध DMCA केसहरू बनाएको छ। मa्गाहेरेको संग्रहमा मुख्यतया कोरियाली मa्गा, ह Hongकong म Mang्गा, चिनियाँ मa्गा, यूरोपीयन मa्गा, आदि सहितको जापानी मas्गास हुन्छ।
वेबसाइटको इन्टरफेस उत्कृष्ट छ। सबै मa्गा संग्रह बिभिन्न कोटी र विधामा वर्गीकृत गरिएको छ। योसँग एउटा समाचार सेक्सन पनि छ त्यसैले मa्गा प्रेमीहरू पछिल्ला र आगामी मa्गा समाचारहरूमा अपडेट हुन सक्छन्।
मंगाडेक्सले धेरै मas्गास कमिकहरू मात्र प्रदान गर्दैन, तर प्रत्येक मa्गाको धेरै अन्य संस्करणहरू पनि छन्। केही संस्करणहरूमा वैकल्पिक फ्यान फिक्शन एन्डिings, रंगीन संस्करण, र आधिकारिक क्रसओभर मंगा श्रृंखला समावेश छ। म्यागाडेक्सले २० भन्दा बढी बिभिन्न भाषाहरू समर्थन गर्दछ जसमा इटालियन, जर्मन, आदि समावेश छन्।
मंगाडेक्समा, तपाईं मंगाका विभिन्न कोटीहरूको लागि आफ्नै समूह बनाउन सक्नुहुनेछ वा तपाईं पहिले नै उपलब्ध समूहहरूलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईं यसको फोरम सेक्सनमा मंगाको बारेमा केहि पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को मa्गास्ट्रिम वैकल्पिक जसले तपाईंलाई म mang्गा कमिक्सको साथ मद्दत गर्न सक्छ म the्गाफक्स हो। यसको लोकप्रियताको कारण, यसले धेरै नक्कली मa्गाफक्स वेबसाइटहरूमा उदय दिएको छ।मूल मa्गाफक्स फ्यानफक्स मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा सुन्तला, सेतो र कालो रंगको विषयवस्तु छ। यसका अद्यावधिकहरू द्रुत छन्।
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस काफी सफा र मैत्री छ। यसले उत्तम पढाइको अनुभवको लागि अनुकूलित जुम समावेश गर्दछ। योसँग अनुप्रयोग पनि छ। तर, अनुप्रयोग कुनै पनि आधिकारिक अनुप्रयोग स्टोरहरूमा उपलब्ध छैन।
यो वेबसाइट आधिकारिक रूपमा जारी हुनु अघि डब्ल्यूएसजे अनुक्रम एपिसोडहरू जारी गरेको कारण मa्गा पाठकहरूको बीचमा लोकप्रिय छ। तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि मa्गाओल एक उत्तम मa्गास्ट्रिम विकल्प हो। वेबसाइट प्रयोग गर्न धेरै सरल छ।यसको मa्गा डाटाबेस एकदम राम्रोसँग व्यवस्थित छ कि कसैलाई पनि उनीहरूले खोजिरहेका म com्गा कमिकहरू फेला पार्न कुनै समस्या भएन।
त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूका लागि धेरै उपयोगी सेक्सनहरू छन् जस्तै नयाँ रिलिज सेक्सन, भर्खरको सेक्शन, भर्खरको अपडेट सेक्सन, सबैभन्दा लोकप्रिय मa्गा सेक्सन, आदि।
मंगाफ्रेक त्यस्ता ठाउँहरू मध्ये एक हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरू केवल म online्गा अनलाइन पढ्न सक्षम छैनन्। तर, तिनीहरू सम्पूर्ण मa्गा डाउनलोड गर्न पनि सक्षम हुनेछन्।यद्यपि मंगाप्रेमीहरू मा mang्गा प्रेमीहरूको बीच धेरै लोकप्रिय छैन। तर, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन यस वेबसाइटलाई मंगा अनलाइन पढ्न भ्रमण गर्दछन्। यससँग विभिन्न विधामा वेबसाइटमा उत्कृष्ट गुणस्तर मa्गा स्क्यानहरू उपलब्ध छन्।
यस वेबसाइटको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यसको इतिहास खण्ड हो जुन तपाईंलाई पनी म read्गा पठनको मद्दत राख्न मद्दत गर्दछ कुनै पनी समस्या बिना नै पहिले पढिएको मa्गा फेला पार्न।
टेनमंगा एक नयाँ अनलाइन मa्गा कमिक्स वेबसाइट हो। तर, यससँग विभिन्न विधाहरूको एक अद्भुत डाटाबेस छ।यो वेबसाइटले म letter्गा नामको पहिलो अक्षर वा नम्बर प्रयोग गरेर म find्गा फेला पार्न सक्छ। वेबसाइटको यो दृश्य धेरै सरल छ।
यदि तपाईं अन्त्यसम्म उपलब्ध रहेको मa्गा पढ्न चाहनुहुन्छ भने पूर्ण खण्डले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
मंगापार्क अर्को लोकप्रिय र प्रयोग गरिएको अनलाइन मa्गा कमिक्स वेबसाइट हो। धेरै मानिसहरू यस वेबसाइटका लागि यसको सेवाको कारण पागल छन्।
वेबसाईटसँग प्रति अध्याय १० वटा छविहरू लोड गर्ने विकल्पसहित सफा र स्पष्ट देखिएको मa्गा पढ्ने क्षेत्र छ।
यस वेबसाइटमा धेरै कमिकहरू छन् जुन तपाईं भर्खरको मa्गा सेक्सन वा नयाँ मांगा सेक्सन र तातो मa्गा सेक्सन जस्ता विभिन्न सेक्सनहरूबाट पढ्न सक्षम हुनुहुनेछ।यससँग विभिन्न विधाहरू छन् जुन धेरै उच्च-गुणवत्ता म mang्गा स्क्यानको साथ बाढी आएको छ।यो एक रमणीय दृश्य छ, र आगन्तुकहरु सजीलो संग उपलब्ध छन् कि सामग्री नेभिगेट गर्न सक्छन्।
होमपेजले तपाईंलाई मंगाको बारेमा भर्खरको अपडेटहरू देखाउन मद्दत गर्दछ।योसँग ठाडो स्क्रोलि ofको सुविधा पनि छ जसले पढ्नलाई अझ सुविधाजनक बनाउँछ। यसले एकैचोटि सबै छविहरू लोड गर्दछ, जुन तपाईं पढ्ने क्रममा डाटा बचत गर्न पनि बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ मa्गास्ट्रिममा बारम्बार आगन्तुक हुनुहुन्छ भने हामी पक्का छन् कि तपाइँ मa्गापाण्डालाई माया गर्नुहुन्छ।जब तपाइँ मa्गापाण्डा वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाइँ उच्च स्तरको मa्गा कमिकको लेब्रेरी पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।तपाईं आफ्नो फोन, कम्प्युटर, वा ट्याब्लेट मार्फत पनि यो वेबसाइट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं कार्य, साहस, रहस्य, रोमान्स, थ्रिलर, र अधिक धेरै को रूप मा हरेक प्रकारको हास्य खोज्न सक्षम हुनु हुनेछ।अनलाइन पढ्ने सुविधा पनि मंगास्टेम जस्तै समान छ। वेबसाइटमा एक आश्चर्यचकित विकल्प छ जुन तपाइँलाई मद्दत गर्ने बेलामा कुन कमिक पढ्ने बारे अलमल्ल हुनुहुन्छ।
हामीलाई थाहा छ कि कमिकहरु लामो समय को लागी मानिसहरुको लागी एक भाग हो। यो तपाईंको आफ्नै कल्पनाशैली बाँच्नको लागि एक तरीका हो। म word्गा शब्द भारी छ र तपाईंले कुनै विशेष प्लेटफर्ममा भरोसा गर्नुपर्दैन।यद्यपि, मast्गस्ट्रिम अनलाइन मa्गा कमिकहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय वेबसाइटहरू मध्ये एक थियो। तर यस वेबसाईटको शटडाउनका कारण धेरै अन्य वेबसाइटहरू देखा पर्‍यो।
त्यसोभए, यहाँ हामीसँग मंगस्ट्रीमका लागि उत्तम विकल्पहरू पाएका छौं तपाईंलाई आनन्ददायी पढाइको अनुभव। चाँडै जानुहोस् र म्यानस्ट्रीमको उत्तम विकल्पहरू जाँच गर्नुहोस् तपाईंको मनपर्ने कमिकहरू पढ्नको लागि।
१० सर्वश्रेष्ठ KissAnime.ru विकल्पहरू
सर्वश्रेष्ठ एनिम स्ट्रिमिंग साइटहरू
NordVPN कालो शुक्रवार २०२० -% 83% अफ (आश्चर्यजनक सम्झौता)
VPN कालो शुक्रवार २०२० डिलहरू - लगभग% ०% छुट (प्रमाणित)
नि: शुल्क फिल्म अनलाइन नेट हेर्दै
विन्डोजहरूको लागि अन्तिम कट प्रो
पीसीको लागि एन्ड्रोइड ओएस इमुलेटर
वेबसाइटहरू डाउनलोड गर्न फिल्महरू नि: शुल्क
यूट्यूब टिभी बनाम स्लि vs बनाम हुलु
नि: शुल्क xbox प्रत्यक्ष रिडेम कोडहरू जुन काम गर्दछ